यो धैर्यता कायम गर्ने समय हो ! | Chitwan Post Daily
वर्तमान कठिन अवस्थामा हिम्मत, आशा र विवेकलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिवक्ता एवम् मानवतावादी शान्तिदूत प्रेम रावतले भिडियोका माध्यमबाट मानिसहरूमाझ आफ्नो सन्देश प्रवाह गरिरहनुभएको छ । उहाँले राख्नुभएको सन्देशको केही अंशलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
हाम्रो छेउछाउमा जे–जे भइरहेका हुन्छन्, त्यसबाट हामी प्रभावित हुन्छौँ । हाम्रो इच्छा अनुकूल कुनै कुरा भएमा हामीलाई खुसी लाग्छ । जब इच्छा विपरीत कुराहरू हुन्छन् तब हामीलाई दुःख महसुस हुन्छ । प्रकृतिले त जे गर्दै आइरहेको छ र जे गर्नुपर्ने हो त्यही गरिरहेको हुन्छ । पृथ्वी घुमिरहेको छ । सूर्य उदाउँछ । चन्द्रमा चम्कन्छ । यो क्रम चलेको पनि हज्जारौँ–करोडौँ वर्ष भइसकेको छ । रात पनि पर्छ अनि उज्यालो पनि हुन्छ । यथार्थतः मान्छे यस पृथ्वीमा आउँछ अनि एकदिन यहाँबाट जानुपर्ने हुन्छ । तर, मानिस हुनुको अर्थ के हो ? मानिस व्यस्त छ किनकि उसले जागिर खानु छ । नोकरी गर्नुपर्ने कारण के हो भने उसलाई घर चाहिएको छ, खाद्यान्न चाहिएको छ अनि यी सारा चीजका लागि उसले काम गर्नुपर्छ । धन कमाउनुपर्छ किनभने त्यही धनबाट उसले खाद्यान्न, घर, कपडा यी सबै चीजहरू किन्न सक्छ । अनि, यो संसारमा मानिसहरू यो नै सबैथोक हो भनेर हिँडिरहेका छन् । तथापि, मानिस यो संसारमा आउनुको तात्पर्य के यही नै हो– मानिस यस संसारमा आएर जागिर खाओस्, धन आर्जन गरोस् अनि धनको अभावलाई पनि महसुस गरोस् !
यो मानिसको शरीर किन पाइएको छ ? यसबाट के गर्नुहुन्छ ? यो कस्तो साधन हो ? केलाई हामी आनन्द भन्न सक्छौँ ! यो संसारमा सबैले जे गरिरहेका छन् अर्थात् सबैले गरिरहेका छन् भन्दैमा राम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन । यो मानिसको शरीर प्राप्त हुनुको कारण के हो ? यी सबै कुरा भएपछि पनि मानिस किन खुशी छैन ? एउटा सानो किटाणु, एउटा सानो भाइरस जसले यो पूरै संसारमा विध्वंस मच्चाएको छ । यस्तो किन भयो ? ठूला–ठूला देशलाई तहसनहस बनाएर राखेको छ । यसर्थ प्रश्न के उठ्छ भने सबै कुरा भएपछि पनि मानिस शक्तिशाली हो या कमजोर ? जब मानिसले आफ्नो गुणलाई नै बुझ्दैन भने ऊ कमजोर नै साबित हुनेछ किनकि जुन चीजमा मानिस समर्पित छ त्यसका लागि उसको सृष्टि भएको होइन ।
यो कोरोना भाइरस आएपछि सरकारले के भन्यो, ‘आइसोलेसनमा बस’ । ‘आइसोलेसनमा बस्नु’ को अर्थ ‘बाहिर नजानुहोस्, आफ्नो घरमा बस्नुहोस् ।’ तर, मानिसहरू घरमा बस्न सक्दैनन् । जब घरमा बस्नु नै छैन भने त घर केका लागि बनाइन्छ ! घर त यसकारण बनाइन्छ किनभने त्यो आवश्यक छ । मानिस आपूmसँग बस्न सकिरहेको छैन । उसको अरूसँगै बस्ने इच्छा छ । अरूसँग उठबस गर्नु उसका लागि ठीक छ । अरूसँग गफगाफ गर्ने कुरालाई मानिसले राम्रो मान्छ । यी सबै कुराहरूका बाबजुद मानिसले जुन अभाव महसुस गरिरहेको छ त्यो यसकारण भइरहेको छ किनभने उसले आपूmले आपूmलाई नै चिन्दैन । यदि उसले आपूmले आपूmलाई चिनेका भए उसलाई यी चीजसँग डर लाग्ने थिएन । यी सबै चीजहरू हुँदाहुँदै पनि ऊ आफ्नो साथमा रहन सक्छ । जब तपाईंले आपूmले आपूmलाई चिन्नुहुनेछ तब तपाईंलाई तपाईंको गुणका बारेमा थाहा हुनेछ । किनभने, तपाईंभित्र करुणा पनि छ र दया पनि छ । खुसी हुने गुण पनि तपाईंभित्रै छ । मानिसलाई त के लाग्छ भने यो दुनियाँले हामीलाई दुःखी तुल्याइरहेको छ तर यस्तो पनि होइन । दुःख पनि तपाईंभित्र छ अनि सुख पनि तपाईंभित्र छ । संसारसँग यसको केही सम्बन्ध छैन । ‘सुख पनि हामीभित्रै छ अनि दुःख पनि हामीभित्रै छ’ भन्ने कुराका बारेमा थाहा पाएर यसलाई पूर्ण रूपले स्वीकार गरेपछि तपाईंले दुःखी हुनु आवश्यक हुँदैन ।
तपाईंभित्र भएको चीजलाई खोज्नुहोस् जसबाट तपाईं खुसी हुन सक्नुहोस् । हाँसो पनि तपाईंभित्रै छ अनि रोदन पनि तपाईंभित्रै छ । तपाईंलाई त के लाग्छ भने यी सबै कुरा बाहिरबाटै आउँछन् । जुन दिन तपाईं यी कुराहरू बाहिरबाट आउँदैनन् तपार्इँभित्रै छन् भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ≤ जुन दिन तपाईंलाई कसैले बाहिरबाट दुःखी तुल्याउने होइन, तपाईं स्वयम्ले आपूmले आपूmलाई दुःखी तुल्याइरहनुभएको छ भन्ने कुरालाई बुझ्नुहुन्छ त्यस दिन तपाईंको संसार नै बदलिनेछ । त्यसपछि तपाईंले संसारलाई पहिलाको नजरले हेर्नुहुनेछैन । तपाईंभित्र बस्नुभएका (सृष्टिकर्ता) सँग मित्रता गाँस्नुहुनेछ । यसको अर्थ बाहिर तपाईंका साथीभाइ हुँदैनन् भन्ने पनि होइन । हुन्छन्, तर तिनीहरूबाट कस्तो अपेक्षा गर्नुहुन्छ त्यो कुरा फेरिनेछ । अनि, कुनै पनि कारणले सबै चीजलाई छोडेर यदि तपाईं आफ्नै साथमा रहनुभयो भने तपाईं त्यसका लागि दुःखी हुनुहुनेछैन । चाहे त्यो कुनै बाध्यता होओस् या कोरोना भाइरस होओस् या अन्य केही होओस् ।
यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो । आफ्नो गुणलाई बुझ्नुहोस्, तपाईंको वास्तविक गुण के हो ! आपूmले आपूmलाई चिन्ने कोसिस गर्नुहोस् । यदि आपूmले आपूmलाई चिन्नुभएन भने त जे भइरहेको भए पनि त्यो कुरालाई तपाईंले बुझ्नुहुनेछैन ।
यो समय आपूmमा धैर्यता राखिरहनुपर्ने समय हो । आपूmभित्र शान्ति कायम गर्नुहोस् । बाहिर त जे भइरहेको छ, त्यो भइरहेकै छ । तपाईंले आपूmभित्र शान्ति यथावत् राख्नुहोस् । नडराउनुहोस् । डरलाई आउन दिनु हुँदैन । यो समय पनि बित्नेछ । आनन्द लिनुहोस् । तपाईंभित्र यो श्वास आइरहेको छ । यसलाई बुझेर यसको पूर्ण रूपले फाइदा उठाउनुहोस् अनि आफ्नो वास्तविक गुणलाई चिन्नुहोस् ।